Falanqeynta Kulanka Darbiga Manchester City Vs Tottenham Hotspur Ee Horyaalka Premier League
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka Darbiga Manchester City Vs Tottenham Hotspur ee Horyaalka Premier League
Mancheser City ayaa garoonkeeda ku soo dhaweeneysa Kooxda Tottenham oo kulamadii ugu danbeeyay ku jirtay Xaalad adag Xili City ay ku jirto mid kamid ah Waqtiyadii ugu feecnaa Taariikh-deeda.
Kulanka Manchester City vs Tottenham Hotspur
Ruben Dias iyo Rodrigo ayaa la filayaa inay ka soo kabsadaan xanuun iyo dhaawac siday u kala horreeyaan laakiin Fernandinho ayaa seegi doona dhibaato bowdada ah.
Tababaraha Spurs Jose Mourinho ayaa sheegay in baaritaankii lagu sameeyay Gareth Bale isbuucaan uusan soo bandhigin wax dhaawac ah laakiin weeraryahanka ayaa go’aansan doona inuu dareemayo inuu ciyaari karo.
Midkoodna ciyaartoyda kale ee Tottenham ee dhaawaca ah diyaar uma ahan inuu soo laabto.
Manchester City ayaa badisay todobo ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku kulmaan Etihad Stadium, kaliya waxaa laga badiyay 14kii Febraayo 2016.
Si kastaba ha noqotee, Spurs ayaa badisay labadii kulan ee horyaalka – iyadoo gurigooda lagu ciyaarayo – iyadoo Jose Mourinho uu yahay tababarahooda.
City ayaa badisay 15 kulan oo isku xigta tartamada oo dhan, waana rikoor ay u heysato koox Ingariis ah, mana laga badinin 22 kulan tan iyo guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Tottenham bishii November.
Kaliya seddex gool ayaa laga dhaliyay 14kii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka.
Spurs ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay ee ay martida ahaayeen (D3, L2). Waxay lumin karaan kulamada isku xigxiga ee kulamada horyaalka markii ugu horreysay tan iyo bishii Oktoobar 2019.